Waa nasiib darro in aaladaha ecommerce aysan mudnaanta ka dhigin suuqgeynta. Haddii aad leedahay dukaan internetka ah, gabi ahaanba ma buuxin doontid awoodaada dakhliga oo buuxa illaa aad awoodid inaad iibsato macaamiil cusub oo aad u kordhiso dakhliga macaamiisha hadda jirta.
Nasiib wanaagse, waxaa jira nooc aad u ballaaran oo ah istiraatiijiyad otomaatig ah oo suuqgeyn ah halkaas oo bixisa dhammaan aaladaha lagama maarmaanka u ah inay si otomaatig ah u bartilmaameedsadaan macaamiisha halka ay u badan tahay inay ka furaan, guji, oo ay wax ka iibsadaan. Mid ka mid ah barnaamijyada noocan ahi waa Gawaarida Guru. Gawaarida Guru waxay bixisaa astaamo kasta oo loo baahan yahay si loo kordhiyo dakhliga macaamil kasta oo aad ku qabato ololeyaal suuqgeyn shakhsiyeed oo isdaba joog ah.